Maitiro ekudzima otomatiki switch switch yeAirPods | IPhone nhau
Maitiro ekudzima otomatiki switch switch yeAirPods
Rimwe zuva ku # podcastapple yatinorekodha vhiki nevhiki yedu diki asi yakakura Youtube chiteshi, takataura nezve kutonhorera kwechimiro chacho switching kubatana pakati pemidziyo otomatiki kubva kuAirPods uye zvakare yematambudziko ayo izvi zvinogona kuunza kumushandisi.
Zvakanaka, nhasi tichaona kuti tingadzivise sei otomatiki switch switch pakati pemidziyo. Uye ndezvekuti kazhinji hapana matambudziko neiri basa asi mu zvinogona kunge pane imwe nguva iwe uchifanira kumisa basa iri nekuda kwechimwe chikonzero saka regai tione matanho akapusa ekuzviita.
Dzima basa iri nyore uye zvakapusa
Sezvo iOS 14, iPadOS14 uye macOS Big Sur iri basa rinoitwa uye tinogona kuzvimisa nyore. Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kubatanidza maAirPod edu zvakananga kune iyo iPhone, iPad kana Mac uyezve isu tinofanirwa tsvaga marongero eBluetooth. Kamwe mukati tinofanira tinya «ini» iyo yatinowana padhuze nezita remahedhifoni (izvo zviri pachena kuti zvichave zvedu) uyezve isu tinongofanirwa kusarudza: "Pamubatanidzwa wekupedzisira kune ino iPhone / iPad". Zvekubatana nemaMacs, kuwana kunoitwa mukati meSystem Preferences> Bluetooth uye tinofanirwa kusarudza "Pane yekupedzisira kubatana kune iyi Mac".
Nezvo, zvatinoita ndezvekuti "kusvetuka" pakati pemidziyo kwakanzurwa saka nenzira iri nyore isu tinodzivirira kuti mahedhifoni akabatana muifoni yeApple isu tiri neMac tichiona zvakateedzana kana zvinopesana. Kumutsiridza shanduko yekushandura mashandiro otomatiki isu tinofanirwa kutevedzera nhanho dzakafanana asi sarudza iyo "otomatiki" sarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima otomatiki switch switch yeAirPods
Apple Podcast Zvino Inowanikwa paAmazon Echo Vatauri uye Fire TV
Apple Inotangazve Kugadzira KweMangwanani Ratidza Mwaka XNUMX